Laharana maitso: fantaro ny hampiasana ny 910, 913, 914 | NewsMada
Laharana maitso: fantaro ny hampiasana ny 910, 913, 914
Misy karazany telo ireo laharana maitso azon’ny olona antsoina ho an’ity ady amin’ny Coronavirus ity eto Madagasikara. Nanazava ny minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra, Ramaherijaona, omaly tetsy amin’ny CCO Ivato, fa mitaky ny fahendren’ny tsirairay ny fiantsoana izany fa tsy tokony hosangisangina na hanehoana tsy fahamatorana.
Ho an’ny laharana 910, maimaimpoana ny fiantsoana io laharana io raha toa ka misy fanontaniana tiana ho fantatra mahakasika ny valanaretina Coronavirus. Efa misy “repondeur” manazava ihany ao ary misy ny olona mandray ny mpiantso avy eo ho an’ny fanontaniana manokana. Mandeha manomboka amin’ny 6 ora maraina hatramin’ny 10 ora alina io laharan-tariby 910 io.
Ho an’ny laharana maitso 913 kosa, maimaimpoana hatrany ny fiantsoana azy. Ireo olona miahiahy sao tratran’ny aretina Coronavirus noho ny fambaran’aretina mitranga aminy na amin’ny ankohonany na amin’ny manodidina azy no miantso io laharana io.
Dokotera avy hatrany ny mandray ny antso ary manome ny torohevitra rehetra tokony hatao sy mandray ny fepetra raisina hamonjena haingana ilay marary. Mandeha manomboka amin’ny 6 ora maraina hatramin’ny 10 ora alina ihany koa io laharana io.
Ho an’ny laharana 914, ireo olona avy any ivelany tonga eto Madagasikara no miantso io laharana io. Andoavam-bola ny fiantsoana izany. Matetika, tsy mahafantatra ny fepetra tokony harahina ireny vahiny ireo ka amin’ny alalan’io laharana io ny hanontaniany ny tompon’andraikitra.
Afaka miantso io laharana 914 io ihany koa ireo rehetra mahita olona avy any ivelany, tokony mbola hitoka-monina kanefa tsy manaja izany fa miriaria eny an-dalambe eny ahafahan’ny tompon’andraikitra mandray ny fepetra sahaza azy ireny haingana.
Maharitra telo minitra eo ny faharetan’ny antso itondran’ny tompon’andraikitra fanazavana ho an’ireo mila izany.